Miaramila karana 20 sy sinoa miisa 43 no matin'ny fifandonana tany India-Sina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miaramila karana 20 sy sinoa miisa 43 no matin'ny fifandonana tany India-Sina
Raha ny fampitam-baovao avy any India dia nahatratra 43 ny miaramila mpiambina teratany sinoa namoy ny ainy na naratra vokatry ny fifandonana tamin'ny tafika indiana momba ny lohasahan'i Galwan, izay natao ny alatsinainy sy talata teo.
Tsy mbola nanamafy ny tatitra momba ny maty i Beijing hatreto.
Miaramila 20 farafahakeliny miaramila miaramila Indiana no maty tamin'ny fifandonana tamin'ny tafika sinoa noho ny faritra misy ady any avaratry ny Kashmir notakin'i Beijing sy New Delhi. Tsy nanamafy ny tatitra momba ny maty i Beijing.
Ny tafika indiana dia nanamafy ny fahafatesan'ny manamboninahitra iray sy miaramila roa tamin'ny voalohany, saingy namoaka fanambarana ofisialy ny talata hariva lasa teo ary nilaza fa ireo miaramila fito ambin'ny folo naratra mafy dia "tratry ny maripana ambany-zero amin'ny faritry ny havoana avo" ary maty tamin'ny ratra.
"Ny roa tonta dia niharan-doza izay azo sorohina raha ny fifanarahana tany amin'ny ambaratonga avo kokoa no narahin'ny ankolafy sinoa tamim-pitandremana," hoy ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny India, tamin'ny fanomezan-tsiny ireo fifandonana tamin'ny "fiezahan'ny sisin'ny sinoa hanova ny fomba teo aloha."
“Soa avy any Beijing ity,” hoy ny bitsika nataon'i Hu Xijin, tonian-dahatsoratry ny gazety Sinoa Global Times, ary nilaza fa “ny ankolafy sinoa dia tsy maniry ny hampitahan'ny olona avy amin'ny firenena roa ny isan'ny maty mba tsy hitarika ny saim-bahoaka.”
“Te hiteny amin'ny lafiny Indiana aho, aza miavonavona ary aza diso ny fameperana an'i Shina ho malemy. Tsy te hanana fifandonana amin'i India i Sina, fa tsy matahotra an'izany izahay, ”hoy ihany i Hu.